Kubata hove mumamiriyoni emadhamu | Martech Zone
Kubata hove mumamiriyoni emadhamu
Chipiri, August 25, 2009 Muvhuro, Nyamavhuvhu 24, 2009 Adam Mudiki
Rimwe zuva ndanga ndichidya masikati neboka revanhu vainyanya kushanda mumasangano ekushambadzira, emafemu ekushambadzira.
Douglas Karr, muvambi we Martech Zone, aitaura kuboka nezve zvemagariro enhau uye ayo 'mashandisiro senge chishandiso chekushambadzira. Chimwe chezvinhu zvaakataura chakanyatso rova ​​tambo neni.
I am going to paraphrase… Doug akataura kuti kushambadzira kwaimbove nyore, iwe waive nemasvikiro makuru mashoma (Dhinda, TV, Rhedhiyo) kubva kwaunotenga uye zvese zvawaifanira kuita kwaive kufunga kuti muzana yemabhajeti ako mumwe nemumwe akawana . Iwe waive wakakosha hove dzevatengi mugungwa.
Manje na evanhu vezvenhau, mobile marketing, vanyora, social network uye dzese dzimwe nzira nyowani dzekutaurirana iwe hausi kuredza mumakungwa zvakare.
Vatengesi vava nemamiriyoni emadhamu ekuredza kubva. Kungofanana nekuredza hove, unogona kutambisa nguva yako nekuedza munzvimbo dzese dzisina kunaka. Zvakare, sekubata hove, iwe unofanirwa kutsvaga masvikiro (madziva) anokushandira uye tarisa pane iwo.
Ini ndaifunga ichi chaive fananidzo huru yekutengesa munyika yanhasi. Kushambadzira pamhepo uye evanhu vezvenhau zvaunza shanduko yakakosha munzira iyo vatengi vanotarisira kutaurirana.
Iko kambani yako ichiri kuyedza kubata hove mugungwa here?
Twitter Mutengo Faux Pas